Nhau - Chiedza chinotanga
Mune iyo photocurable system, inosanganisira UV glue, UV kudhiraina, UV ink, nezvimwewo, shanduko yemakemikari inoitika mushure mekugamuchira kana kutora simba rekunze, uye kuora kuita mahara radicals kana cations, zvichikonzera iyo polymerization reaction.
Photoinitiators zvinhu zvinogona kuburitsa mahara radicals uyezve kutangisa polymerization nekujekesa.Mushure mekunge mamwe mamonamu avhenekerwa, anotora mafotoni uye oita mamiriro anofara M *: M + HV → M *;
Mushure mekunyunyuta kwemamolekemu akagadziriswa, yakasununguka M * → R · + R '· inogadzirwa, uyezve monomer polymerization inotangwa kuumba iyo polymer.
Radiation kurapa tekinoroji ndiyo nyowani Energy Kuchengetedza uye Yekuchengetedza tekinoroji tekinoroji, iyo inovhenekerwa nemwenje ye UV (UV), elektroni danda (EB), infrared mwenje, inoonekwa mwenje, laser, kemikari fluorescence, nezvimwe, uye inosangana zvizere ne "5E" hunhu: Inoshanda, Inogonesa, Mari, Kuchengetedza Simba, uye Zvemagariro Shamwari. Naizvozvo, inozivikanwa se "Green Technology".
Photoinitiator ndechimwe chezvakakosha zvezvinhu zvekunamatira zvine fotogodhi, izvo zvinoita chinhanho chakakosha pakurapa mwero.
Kana iyo photoinitiator yadzvanywa nemwenje yeultraviolet, inotora simba rechiedza uye ikatsemuka kuita maviri anoshanda emahara radicals, iyo inotangisa iyo cheni polymerization yeiyo photosensitive resin uye iyo inoshanda diluent, ichiita iyo yekunamatira kuyambuka-yakabatana uye yakasimbiswa. Iyo fotoinitiator ine hunhu hwekukurumidza, kuchengetedza kwezvakatipoteredza uye kuchengetedza simba.
Iwo anotangisa mamorekuru anogona kupinza mwenje munzvimbo yeultraviolet (250 ~ 400 nm) kana inoonekwa nharaunda (400 ~ 800 nm). Mushure mekutora mwenje wesimba zvakananga kana zvisina kunangana, iwo anotangisa mamorekuru kushanduka kubva pasi pevhu kuenda kune yakanakidzwa singlet nyika, uyezve kune inofara katatu nyika kuburikidza nepakati peiyo system shanduko.
Mushure mekuti singlet kana katatu nyika inofara kuburikidza ne monomolecular kana bimolecular chemical reaction, zvidimbu zvinoshanda zvinogona kutanga monomer polymerization zvinogona kuva mahara radicals, cations, anions, nezvimwe.
Zvinoenderana neakasiyana maitiro ekutanga, mapikichainitiator anogona kukamurwa kuita yemahara radara polymerization photoinitiator uye cationic photoinitiator, pakati payo yemahara radical polymerization photoinitiator ndiyo inonyanya kushandiswa.